I-Apartment ene-terrace kunye ne-grill e-Palermo Soho
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguIlana
Indlu yanamhlanje kunye ne-minimalist. Inethayili enkulu kakhulu enebarbeque.
Ubumelwane bulungile, kukho ivenkile enkulu ecaleni komnyango, kunye negrocer eluhlaza kunye nebhakary kumgama weemitha ezimbalwa. Isitalato apho ifulethi lihlala khona lifana neendawo zaseBuenos Aires, ezinamatye anqabileyo kunye nemithi emihle, kwaye iphakathi komgama wokuhamba wenani elikhulu leebhari, iivenkile zokutyela kunye neevenkile zokuyila, ezinike ummelwane igama elithi Palermo Soho. Iibhloko ezimbalwa ukusuka apho kukho isikhululo sikaloliwe ongaphantsi komhlaba kunye neendawo zokumisa iibhasi ezininzi.
Indlu ikumgangatho we-10, inobumfihlo obuninzi kunye nombono omkhulu wesixeko. Ligumbi elitofotofo, lale mihla, elisebenzayo.
Ndiyayithanda indawo yonke !!!! Ibhloko yendlu ithule kakhulu, yindawo yokuhlala, enezakhiwo kunye nezindlu, uya kuziva ukuba uhlala kwi-BA. Kodwa kamsinya nje xa uqala ukuhamba, imivalo, iicafe, iitafile esitratweni nakwithafa, iivenkile zokuyila, iishedi ezineempahla zokunxiba kunye neefairs kwizikwere zivela.
Ukongeza, isikhululo semetro sasePlaza Italia sikufutshane, kwaye iindawo ezininzi zokumisa iibhasi, ungazifumana ngezithuthi zikawonke wonke phantse naphina esixekweni. Enye yeendlela zebhasi zabakhenkethi zeBA nazo zidlula kufutshane.
Ndisoloko ndifumaneka ngeposi, nge-WU, okanye ngokobuqu. Kusoloko kukho abantu kwindawo yolwamkelo lwesakhiwo abaya kukulungela ukukunceda ngayo nantoni na oyifunayo.
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-R6402